Mpanamboatra sy mpamatsy superplasticizer China Polycarboxylate | Divenland
Superplasticizer miorina amin'ny polycarboxylate dia plastika Super plastika vaovao novolavolaina sahaza ho an'ny tetikasa injeniera ao anatin'ny toetr'andro isan-karazany ary voalohany indrindra hampiasaina amin'ny faritra mafana, izay misy endrika ranoka sy vovoka.
Izy io dia mahomby indrindra amin'ny fihenan'ny rano avo lenta eny an-tsena izay mety hampiakatra hatramin'ny 35-40%. Noho ny votoatiny Lowide klorida sy alkali, tsy misy faharatsiana amin'ny vy-bar, stabilité avo & ny toetran'ny olona tsara tarehy sy tsy mihetsika, dia nekena tsara izy ireo tamin'ny alàlan'ny fantsom-pahefana avo ho an'ny lalamby, fialofana, fifamoivoizana, tetezana ary herinaratra., Nahazo valiny tsara avy amin'ny mpanjifa manerantany. Izy io dia superplasticizer tena tsara amin'ny premix ny fananganana sy ny beton-toerana.
1. mety ho konkrit mivaingana fampiasa, mivaingana flowability, mivaingana mateza, betitika-simenitra refractory betonika, castages refy refy amin'ny ambany simenitra, simenitra simenitra, fananganana beton-tena ary ny sisa.
2. mety amin'ny fantsom-pitaovana, ny fanaingoana ny gorodona, ny vokatra gypsum, ny famehezana iraisana, ny rihitra avo lenta sns.
3. indrindra mety amin'ny rihitra manokana miaraka amin'ny tanjaka avo sy ny fivezivezena avo
Ireo tondro teknika:
fijery Fotsifotsy mavo na volo fotsy mavo
halehibeny marobe 350-500 kg / m3
votoaty hamandoana ≦ 3%
fahaverezan'ny tsy fahafantarana ≧ 85%
fineness （0.315mm mesh） ≧ 90%
Chloride Content (%) 0.1 ≦
Fihenan'ny rano amin'ny feta ≧ 20%
0.15-0,40% (Araka ny lanjan'ny singa simenitra)
Manaraka: Silicone Hydrophobic Powder